ओलीको प्रश्न ? निर्वाचन भन्नेवित्तिकै सातो किन गएको ? - Online Aawaj
पत्रकार हरिबोल आचार्यले दिए नि:शुल्क पुस्तक
हलेसीमा शुरु भयो सितोरियो कराते प्रतियोगिता
अधिवक्ता घिमिरेद्धारा नि:शुल्क पुस्तक हस्तान्तरण
तीन दलको बैठक : चुनावमा जान देउवाले प्रस्ताव गर्ने
दिक्तेलमा निःशुल्क आँखाको शल्यक्रीया शिबिर
हलेसीमा फन पार्क निर्माण हुने पक्का
पत्रकारिता त गर्नुहुन्छ, अनि काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि ?
कर्णाली प्रदेशका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिँदै यस्तो छ तयारी
प्रहरी र भारतीय तस्करबीच दोहोरो भिडन्त
आखिर के हो रक्सी भन्ने चीज रक्सीमा रम्दै हराउँछ जिन्दगी ।।।
गाउँपालिका अध्यक्ष राईलाई लगाएको आरोप निराधार
Home/अन्तर्वार्ता/ओलीको प्रश्न ? निर्वाचन भन्नेवित्तिकै सातो किन गएको ?
ओलीको प्रश्न ? निर्वाचन भन्नेवित्तिकै सातो किन गएको ?
ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौति
न्युज ब्युरो अनलाइन आवाज २०७७ पुष २६, आईतवार ११:४७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौति दिएका छन् । ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्षलगायत आन्दोलित भइरहेको बेला आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरुलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौति दिएका हुन ।
उनले भने, ‘निर्वाचनमा जाने भन्ने वित्तिकै खुट्टा किन कामेको ? निर्वाचन भन्ने वित्तिकै सातो किन गएको ? जनताको बीचमा जाने भन्ने वित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने वित्तिकै ? अरु कुनै प्रभुको चरणमा जाने भनेको त होइन नि ? जनताको शरणमा जाने भनेको । नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले दण्ड देलान् । नेपाली जनताको बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न तपाईँहरुहरु जानुहोस् । जो जसलाई चित्त बुझेको छैन । तपाईँहरुलाई जनताले त्यही जवाफ दिएर पठाउनेछन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवारीबोधका साथ संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको दावी गरे ।
उनले भने, ‘गैरजिम्मेबार भन्या के हो ? मैले विल्कुल जिम्मेवारीबोधका साथ जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नुपछ , केही पदलोलुप मान्छेहरुको आत्मकेन्द्रीत स्वार्थी क्रियाकलापहरुलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनुहुँदैन भनेर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । गैहजिम्मेवार कसरी भयो ? विल्कुल जिम्मेवारीका साथ, कर्तव्यबोधका साथ यो काम गरिएको हो । ”
उनले संसद विघटन संगै आफ्नो लोकप्रियतामा कमि आएको टिप्पणी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको परीक्षण निर्वाचनमा गएर गर्न चुनौति दिए । ‘कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झरेछ । जिरोमा झरेछ कि ? माईनसमा गएछ कि ? प्लसमा गएछ । निर्वाचनमा हेरुँ न अब । अब गफ पिट्ने दिने गए । अब गफ पिटेर हुदैन अब मैदान आउने’, उनले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरु देखिए, रिङमा नचढ्दै बेल्ड लगाउने । अब मैदान घोषणा गरिएको छ । र रिङ तयार भएको छ । रिङमा आउनुहोस् त्यहाँ जितेर लगाउनुहोस् न बेल्ड ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थायीत्व र अस्थिरता चाहनेहहरुले आफुलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दाबी गरे । उनले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि आफूले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु भने अस्थिरता नभएको स्पष्ट गरे ।
उनले भने, ‘वास्तविक स्थायित्व के हो ? संविधानले स्थिरता ५ वर्षमा चुनाब गर्नेलाई मात्रै भनेको छैन । सरकार बन्न सकेन भने तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को ७ ले । तत्काल चुनावमा जाने व्यवस्था गरेको छ । अल्पमतको ले पनि, पार्टी विनाको पनि हुन सक्छ, एउटा व्यक्ति सांसदले दलको नेताले होइन, व्यक्ति सांसदले पनि यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसको सिफारिसमा राट्रपतिद्धारा संसद विघटन हुन्छ र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मिति तोकिन्छ ।’
आफूले चालेको कदम संबैधानिक भएको दाबी पनि उनले गरे । उनले भने, ‘चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधानको कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो । संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थिरता भनिँदैन । अस्थिरता त्यत्तिबेला हुन्छ, बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरु गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता तर्फ, अस्वस्थता तर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरिह हुनुपन स्थिति आउँछ। परिर्वतन उनीहरुले गर्न सक्छन् । हो त्यस्तो स्थिति स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति होइन । अहिले स्थिरताको स्थिति हो । कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन । चाहेर पनि हटाउन सकेन । यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो । कसैले चाहेर पनि फेरबदल गर्न सकेन । यो स्थिरता र स्थायित्वको स्थिति हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नछोड्ने दोहोर्याए । उनले भने, ‘किन छोड्ने ? कसलाई छोड्ने ? यो दान हो र ? कमण्डलु थाप्ने वित्तिकै लौ भनेर दिने ? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको ? यो जनताले सुम्पेको अभिभारा हो , जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई , जुनसुकै अवस्थामा दिन सकिँदैन ।’ यो समाचार रातो पाटीले लेखेको हो ।
न्युज ब्युरो अनलाइन आवाज
हलेसीले ४ सय ३० घरधुरीलाई खाद्यान्न दियो
२०७७ पुष ३, शुक्रबार ०१:४४
देशमा राजनितिक समाधान दिने पार्टी जसपा हो ः वरिष्ठ नेता राई
२०७७ फाल्गुन २५, मंगलवार १४:०७
२०७७ असार २९, सोमबार ०६:१२
तपाईंको आजको राशिफल:
२०७७ श्रावण २९, बिहीबार ०२:५२
तत्काल खोप अपुगभएपछि ६५ वर्ष माथिकालाई प्राथामिकतामा राखेर २३ गतेबाट खोप दिईने
अनलाइन आवाज प्रालिद्धारा प्रकाशित पुर्वि पहाडी जिल्ला खोटाङमा सञ्चालित न्यूज पोर्टल हो । दुर्गम क्षेत्रमा समेत व्यवसायिक पत्रकारिताको विकास गर्ने हेतुका साथ २०७७ सालदेखि यो अनलाइन मार्फत सेवा सुरु गरिएको हो । पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका विक्रिति विसंगती, आरोप र आक्षेपबाट टाढा रहने हाम्रो जोड हो । सत्य तथ्य र निष्पक्ष तवरले सूचना प्रवाहमा ‘तपाइ हाम्रो प्रष्ट आवाज’ भन्ने नारालाई सँधै आत्मासात गद्रै अघाडी वढाउने प्रतिवद्धता गर्दछौँ ।
सञ्चालक \_अध्यक्ष दिवस रिजाल सम्पर्क ९८६९२३२०५८ इमेल imagedibas@gmail.com सह सम्पादक भुमिका न्यौपाने वरिष्ठ संवाददाता चिरञ्जिवि रिजाल संवाददाता मनोज आचार्य,निर्मला आचार्य रिजाल कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकास घिमिरे वरिष्ठ सल्लाहकार कृष्ण आचार्य दर्ता नं २४५७६१ ७७,७८ स्थायी लेखा नं ६०९८३५७२०
© Copyright 2021, All Rights Reserved | JhapaTechnical Pvt.Ltd